Ikhaya elinokuthula enhliziyweni yeNapa Valley
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Joe
Ikhaya elinokuthula enhliziyweni yezwe lewayini laseNapa Valley - i-Arbor House ingaphansi kwemayela elilodwa ukusuka eDowntown Napa kodwa ikude ngokwanele nesiphithiphithi sendawo ematasa yedolobha.
Lesi sakhiwo somlando esihle sinamagumbi okulala amane anezinto zesimanjemanje. Jabulela igumbi lokuhlala elithokomele, igumbi lokudlela kanye nengadi yaseCalifornia etshaliwe ene-gazebo, izindlela zokuhamba zezitshalo nezitezi ezikhanyiswe yilanga ezibanzi.
Sivunyelwe ngokusemthethweni ukuqasha izivakashi zaseNapa Valley
Amaminithi kude newayini elimnandi, ukudla okuphambili kanye nezindawo ezinhle zokuya eNapa Valley - i-Arbor House Napa iyindawo enhle yokuqala uhambo lwakho lwaseNapa Valley.
Lesi sakhiwo somlando esihle sinamagumbi okulala amane anezinto zesimanjemanje. Ikamelo ngalinye linegumbi lalo lokugezela elihlotshiswe kahle eline-ensuite, i-smart screen esikhulu se-smart TV kanye nokufinyelela ku-inthanethi yejubane eliphezulu. Jabulela igumbi lokuhlala elithokomele, igumbi lokudlela kanye nengadi yaseCalifornia etshaliwe ene-gazebo, izindlela zokuhamba zezitshalo nezitezi ezikhanyiswe yilanga ezibanzi.
I-Arbor House iyindawo ekahle yanoma iyiphi inombolo yemicimbi enompheme wayo ozungezayo, izindlela eziyaluza ezinqamula izingadi zaseCalifornia, izihlahla ezinkulu ezikhula kudala kanye ne-gazebo yethu ebukekayo. Kusukela embuthanweni womndeni noma ekubalekeni kwamantombazane, i-Arbor House izokwenza umcimbi wakho uphumule futhi ukhumbuleke.
I-Arbor house ivuselelwe kabusha ngendawo yokuhlala evulekile, igumbi lokudlela kanye nekhishi elihlonyiswe ngokugcwele elinesiqandisi sensimbi engagqwali, i-microwave, ihhavini le-toaster, umenzi wekhofi, amabhodwe, amapani nezitsha ... konke okudingayo ukuze ujabulele ukupheka izithako zendawo. I-Arbor House ihlonyiselwe ukuhlinzeka ngakho konke isivakashi esingakudinga ukuze uthole isizinda esihle sasekhaya kuyilapho sihlola konke okunikezwa yiNapa Valley!
Sihlinzeka ngokulungiswa kwesidlo sasekuseni esilula ngesikhathi sokuhlala kwakho okuhlanganisa ama-muffin esiNgisi, ibhotela, ujamu, ukukhethwa kwamayogathi, i-granola, i-oatmeal, izithelo ezintsha kanye nakho kokubili ubisi kanye nolunye ubisi olungelona olobisi. Ikhofi kanye netiye pods kuyancomeka kukho konke ukuhlala kwakho.
I-Arbor House iqhelelene nokudla kwe-Michelin Star, umculo obukhoma, amabha wewayini, ukuthenga, namagalari. I-Oxbow Public Market egcwele izinhlobonhlobo zezitolo nezindawo zokudlela nayo iwuhambo olufushane ukusuka e-Arbor House njengoba kuyimakethe yamasonto onke yaseNapa Farmer's ngeMigqibelo. Amawayini amakhulu namancane aqhele ngamaminithi nje ukusuka endlini kunoma iyiphi indlela.
I-Arbor house inokufinyelela kalula ku-Highway 29 kanye ne-Silverado Trail. Isikhathi sokushayela: imizuzu engu-7 ukuya ezitolo zewayini zaseCarneros Region kanye nemizuzu engu-5 ukuya ezitolo zewayini zaseNapa eSilverado Trail, imizuzu engu-20 ukuya eSonoma Square, imizuzu engu-10 ukuya e-Yountville, imizuzu engu-20 ukuya e-St. Helena, imizuzu engu-35 ukuya eCalistoga. Uhambo lwamaminithi angu-55 ukuya e-San Francisco, imizuzu engu-55 ukuya e-Oakland International Airport, kanye nemizuzu engu-75 ukuya e-San Francisco International Airport. Ukushayela imizuzu emi-5 ukuya e-Whole Foods, kwaTrader Joe's, ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya e-Lucky Supermarket, ukuqashwa kwebhayisikili le-Fat Tire Bike kanye ne-Starbucks, i-Spa yendawo, i-Barbershop - uhlu luyaqhubeka.
Sinikeza ukungena nokuphuma ngaphandle kokuthinta.